नगर स्तरीय एकिकृत योजना तर्जुमा गोष्ठी सम्पन्न
तीन महिना टिकेनन् ,महेन्द्रनगरमा जडान गरिएका सिसी क्यामेरा !
निर्मला हत्याकाण्डः प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै साेमबार शैक्षिक हड्ताल
प्रदेश ७ को राजधानी ‘गोदावरी’ सिफारिसप्रति कांग्रेस र राजपाको असहमति !!
जुवा खेल्ने १५ जना पक्राउ, डेढ लाख रुपैयाँ बरामद !
निर्मला हत्याका ६० दिनः अनुसन्धानको प्रगति ‘शून्य’
नेविसंघ जापान शाखाको कार्यसमिति गठन
निर्मला हत्याकाण्डः कञ्चनपुरमा ‘कालो तीज’
बेलडांडीमा ३ दिने माकुरा समूह क्षमता विकास तथा नेतृत्व हस्तान्तरण तालिम शुरु
बेल्डाँडी गौरादेवी महेश्वरी मन्दिर समिति द्धारा देउडीया लाई सम्मान !
बेल्डाँडिमा हातिको आतंक, किसान मर्कामा
तेस्रो दिनका खेलमा चार टिम बिजय, क्वाटर फाइनल खेल सोमबार देखि
बेल्डाँडिमा आयोजना फुटबल प्रतियोगितामा युएसबी बेल्डाँडी र बेलौरी बिजय
चेतन बोहरा, रेडियो कञ्चनपुर/भदौँ ३१
नेपाल विद्यार्थी संघ जापान शाखाले ४ शाखा अध्यक्ष सहित ३७ जनाको कार्यसमिति गठन गरेको छ । आइतवार जापान शाखा अध्यक्ष दिपक अधिकारीले जापान शाखाको विस्तार गरेका हुन ।
शाखा विस्तार र नेविसंघ विभागमा रहेर काम गर्नको लागि दीपक अधिकारीलाई नेविसंघ अध्यक्ष नैनसिंह महरले जापान शाखा अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएका थिए। पछिल्लो समयमा जापानामा नेपाली विद्यार्थीको संख्या बढ्दै गएको अवस्थामा विद्यार्थी रहेका विभिन्न शहरबाट प्रतिनिधित्व गर्ने गरी शाखा विस्तार गरेको अध्यक्ष अधिकारीले बताए ।
१२ जना पदाधिकारी, ४ शाखा अध्यक्ष र २१ जना सदस्य सहित ३७ जनाको कार्यसमित अध्यक्ष अधिकारीले गठन गरेका हुन्। अध्यक्ष बाहेक १२ पदाधिकारीमा ५ उपाध्यक्ष, एक महामन्त्री, ५ सहमहामन्त्री र एक कोषाध्यक्ष रहेका छन्। त्यस्तै चार वटा शहरलाई केन्द्रित गरी शाखा अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको छ। जसमा टोक्यो शाखाबाट प्रविण यादब, फुकुआको शाखाबाट निराजन कार्की, नगोया शाखाबाट संजिव महतरा क्षेत्री र अकिनोवा शाखा बाट रमेश अधिकारीलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको छ।
अध्यक्ष अधिकारीले नेपाल विद्यार्थी संघको विधान बसेर जापानामा रहेका नेपाली विद्यार्थीको हक हित र सांगठानिक विस्तारको काममा आफू सक्रिय हुने बताएका छन्। नेपाल विद्यार्थी संघले आगामी कात्तिकमा हुने महाधिवेसनलाई केन्द्रित गरेर संघका शाखाहरूमा अधिवेसन गर्न सुरु गरिसकेको छ। नेपाल बाट ७ नम्बरका प्रदेश सदस्य रमेश ठगुन्नाले जानकारी दिए ।